Umhla My Pet » 7 Imihla Wonke Ukusuka City New York Ngazo
Ukuba kwisiXeko saseNew York neqabane lakho, qinisekisa ukuba nanceba imizuzu embalwa ukuba ukufunda eli phepha. Musa ukukhangela le ingxoxo nokuba awutshatanga kwaye ufuna neqabane esixekweni; uzama enye yezi uthando lwakho olutsha kuya kusinceda ukuba ukudala inkangeleko olungileyo. Ngoko ke, apha imihla esixhenxe elowo City New York ebeye (ukufunda kufuneka siye) phezu.
1. Okwenzeka kwelanga evela esiphekiweyo
Izibini abatsha, le ndawo kwi Hudson ngokuqinisekileyo yenye kwiindawo ukuthandana ishushu umzi izindlu ngoku. The Pan, leyo Ngokusisiseko lightship ezazikayo ye 1929, ndade ovusiweyo kwaye namhlanje ukuba omnye nemivalo ihle kakhulu kombane uza kukhe.
Imboniselo ilanga phezu Hudson River ngokuqinisekileyo nobo kwaye idibanisa ngokundibamba romance ukuba Ambiance ye bar.
2. Chitha injikalanga uthando kwi-Brooklyn Botanical Garden
Ngokukhawuleza uza ukungena Oasis ezidolophini saseProspect Heights, uya kuvakalelwa ngokungathi niza eekhilomitha ukusuka iphithizelayo uze uye kuloo mzi.
I-Brooklyn Botanical Garden na ubuncwane bendalo ngokwaneleyo ukuba sigcine wena neqabane lakho babandakanyeka iiyure eziliqela; njengokuba, le Native Flora Garden, le Cranford Rose Garden, le Shakespeare Garden kwaye ngaphezulu. nokuba, ukuba uza ungathanda kakhulu malunga ndawo intuthuzelo kunzima ukufumana kwezinye iindawo ezininzi umzi.
3. Uhambo ukuba Flushing ezineevenkile ukutya
Ezineevenkile yokutya Flushing, City New York Zidume amuncis ezinjengesiCantonese Mandarin izitya.
Oku kuya kuba ngomhla egqibeleleyo kubo bonke abo Foodies bonafide. Abantu umkhwa wokuposwa imifanekiso umgubo yonke abanayo kwi social networks uya kufumana le mbono ukuthandana kakhulu evuyisayo.
4. Kuhamba emva ngamaxesha:
Ukujonga ukuze achithe ixesha elithile elikhulu kunye neqabane lakho ngexesha lokuwa? Cwangcisa umhla kwindlu ibalulekileyo kwidolophana endala Richmond Town.
5. Utyelelo kwi-Central Park
Central Park yindawo enkulu ukuya neqabane lakho ngexesha kwiinyanga zasehlotyeni. Iyinyaniso ukuba ihlobo kwisiXeko saseNew York idla taxingly kufumile; nokuba, imozulu iba mnandi xa ilanga. Nje ngeziphumo, ngexesha kwiinyanga zasehlotyeni, uyakwazi ngokulula ukucwangcisa imihla ngokuhlwa, evulekileyo.
Central Park, ngazo zonke iinketho ukuzonwabisa ngayo, ngokuqinisekileyo yindawo kakhulu ukuya ngomhla.
6. Yiba kugculela Room Slipper
Abaceba ukuya kuphuma neqabane lakho ngobusuku ngoLwesibini? Ngaba unokucinga kumisa The Room Slipper. wonke ngoLwesibini, kwindawo burlesque izigaba Seth Herzog ngayo comedy bonisa. Naye, Herzog idla uMama yakhe emangalisayo kunye hilarious.
7. Yonwabela umhla movie e Bryant Park
Oku kuya kuba ngomhla ogqibeleleyo bathandi bhanyabhanya bonke abalandeli ye ziyahlonelwa; kodwa, khumbula umhla movie e Bryant Park kuzakusoloko wayeceba ngeMivulo.
qho ngoMvulo, ekutshoneni, kwi movie ngaphandle kuboniswe kule park zoluntu ngasese. izmuncumuncu, nentsuba yewayini kunye ingubo ukugcina ababini kuni ayizukuba kuba ngokwaneleyo ukuba umhla movie ngokuthandana.
Ungathabatha iqabane lakho ukuba siza uthando kwisiXeko saseNew York, nawungcwalisa umhla ube yimpumelelo, kuza kufuneka eyona nto iphambili kwaye luthando.